Ndị na-emepụta efere ígwè - Onye na-ebupụ efere ígwè dị elu & ndị na-ebuga ya
s450 s460 s500 s550 s690 s890 s960 structural efere ígwè
Okwu mmeghe nke ngwaahịa na-adabere n'ịdị elu yana nnukwu akara kredit bụ ụkpụrụ anyị, nke ga-enyere anyị aka n'ọkwa dị elu. Adhering for the tenet of “quality first, customers supreme” for Hot Sale for China Ss450 s460 s500 s550 s690 s890 s960 structural plate steel Anyị na-anabata gị nke ọma iji guzobe imekọ ihe ọnụ na ịmepụta ọdịnihu na-egbuke egbuke ọnụ na anyị. Hot ire maka China Steel Pipe, Steel Tube, Anyị nwere ugbu a raara onwe ya nye na ike ike ahịa otu, na ọtụtụ ...
A312-TP302/316 EBE EBE NA-ECHICHE MMIRI
Flat ígwè nwere nnukwu ọdịiche na ọkpụrụkpụ, obosara na ogologo ruru.
Ịdọ aka ná ntị etinyere: Sayensị ihe onwunwe na teknụzụ (ọzụzụ ọkwa nke mbụ); Ngwa igwe (ọkwa 2 ịdọ aka ná ntị); Ngwa ígwè na ígwè (Ọkwa 3 ịdọ aka ná ntị); Ụdị dị iche iche nke ígwè na ígwè (ọkwa 4 ịdọ aka ná ntị)
Nrụpụta efere ígwè: a na-awụsa efere ígwè na nchara a wụrụ awụ, mee ka ọ dị mma ma tinye ya n'ime ígwè dị larịị. Efere ígwè ahụ dị larịị, akụkụ anọ ma nwee ike ịgbanye ya ozugbo ma ọ bụ bepụ ya na mpempe ígwè sara mbara.
Dị ka ọkpụrụkpụ nke ígwè efere, mkpa ígwè efere <4 mm (nke thinnest 0.2 mm), oké ígwè efere 4 ~ 60 mm, mmezi oké ígwè efere 60 ~ 115 mm.
A na-atụgharị efere ígwè, tụgharịa na oyi. A na-ejikarị emepụta Bridges, ụgbọ mmiri, gwongworo, ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, ụgbọ mmiri dị elu, mmanụ na mmanụ gas, nnukwu ígwè ígwè, wdg.
Efere Efere (Q390 Q345 Q420 Q295 Q690 Q620)
Okwu mmeghe nke ngwaahịa na-adabere n'ịdị elu yana nnukwu akara kredit bụ ụkpụrụ anyị, nke ga-enyere anyị aka n'ọkwa dị elu. Adhering for the tenet of “quality first, customers supreme” for Hot Sale for China Steel Pipe STEEL Plate (A36 Q235 Q345 S275JR S235JR S355JR S355j2), Anyị ji obi ụtọ na-anabata gị ka guzosie ike imekọ ihe ọnụ na ike a na-egbuke egbuke ga-eme n'ọdịnihu ọnụ na anyị. Ọrịre na-ekpo ọkụ maka China Steel Pipe, Steel Tube, STEEL Plate Anyị nwere ugbu a raara onwe ya nye na ike ike ...